How To Auto Post Unlimited in Facebook Group Poster Free - ဘေးကင်းလုံခြုံပိုစတာ
န့်အသတ်အဖွဲ့များအတွက် post လုပ်နည်း ?
မတ်လ 30, 2019
သင်၌မှတ်ပုံတင်ရန်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို, you will be in the free account, သငျတို့သဦးရေအများဆုံး post လုပ်နိုင်ပါတယ် 30 တစ်နေ့လျှင်ရေးသားချက်များ အစမ်းအကောင့်အဖြစ်. သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် န့်အသတ်အုပ်စုများအတွက် post ကို တစ်နေ့လျှင်, ထို့နောက်ကိုသင် upgrade ရန်လိုအပ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရီမီယံအစီအစဉ်များ.
When you are upgraded to premium, သငျသညျန့်အသတ် post ခွင့်ပြုထားပါသည်, သင်သည်လည်းအလွယ်တကူ Facebook ကို၌အကြှနျုပျတို့၏ဆာဗာနှင့်ရှယ်ယာတိုက်ရိုက်ပုံရိပ်တွေနှင့်ဗီဒီယိုများကို upload တင်နိုင်အောင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရီမီယံအစီအစဉ်များပုံရိပ်နှင့်ဗီဒီယိုအပ်လုဒ်ကို features တွေအတူပါလာ.
န့်အသတ် post မသွားမီနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်လုပ်, သင်အသုံးပြုသေချာအောင် spintax format နဲ့ နှင့်ဖတ်ပါ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလမ်းညွှန် သငျသညျမရလိမျ့မညျဟုဒါ facebook ကိုပိတ်ဆို့ထား.ဒါကြောင့်အပြင် , သင်အမြဲသင်တို့ငွေကို site ကို facebook မှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ရှောင်ရှားရန် URL ကို shortner ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ် link တစ်ခုဝေမျှ.
ကျနော်တို့ကိုလည်းအချို့ကိုဖုံးလွှမ်းကြပါပြီ post ဖို့အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးများ Facebook ပေါ်မှာက Facebook အုပ်စုများသို့မဟုတ် Fanpages အပေါ်ပို့စ်တင်ထဲမှာသင်ကူညီစေခြင်းငှါ, အရာ.
သငျသညျစိတျထားသငျ့သညျ post ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် အဆိုပါအကြားအများဆုံးနှင့်ပိုပြီးမြင်သာဖို့လက်လှမ်းမမီတိုးပွါးပေးသော facebook ပေါ် Facebook ကအုပျစုမြား အဖှဲ့ဝငျ.
နောက်ဆုံး, အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကူးခေါင်းကို အဆင့်မြှင့် Facebook မှာအုပ်စုများအတွက်နဲ့ post န့်အသတ်.
အကွိမျမြားစှာက Facebook အဖွဲ့များရန်တင်ရန်ရန် Facebook မှပိုစတာ
ဇူလိုင်လ 1, 2019